ရေအောက်လှိုဏ်ဂူအတွင်းကအိပ်မက်ဆန်တဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ရက်ကေးစ် ဒီ ဗါ့စ် – Digital Photography Myanmar
HomeInspirationရေအောက်လှိုဏ်ဂူအတွင်းကအိပ်မက်ဆန်တဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ရက်ကေးစ် ဒီ ဗါ့စ်
ရေအောက်လှိုဏ်ဂူအတွင်းကအိပ်မက်ဆန်တဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ နောက်ခံအကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ရက်ကေးစ် ဒီ ဗါ့စ်
May 16, 2016 Jedi Inspiration 0
Digital Photography Myanmar ရဲ့ ဒီဆောင်းပါး ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် share လုပ်ပြီးထပ်ဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်ပါးအသစ်တွေအချိန်နဲ့ တပြေးညီဖတ်ရဖို့ အတွက် Digital Photography Myanmar ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း Like/follow လုပ်ပေးပါ။
အဖြူရောင် ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၊ အလင်းတန်းတွေထိုးကျနေတဲ့ လှိုဏ်ဂူတစ်ခုအတွင်းမှာ ငါးအုပ်တစ်အုပ်ကို ရှာဖွေနေတုန်း သဘာဝကျလွန်းလှတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဓါတ်ပုံကို အချိန်ကိုက် ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ အလွတ်တမ်း ရေငုပ်သမား သို့မဟုတ် ဓါတ်ပုံဆရာကတော့ ရက်ကေးစ် ဒီ ဗါ့စ် ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မက်ဆန်ဆန်ခမ်းနားလှတဲ့ ဒီဓါတ်ပုံဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ဓါတ်ပုံထဲကနေရာကို အားလပ်ရက်ခရီးထွက်သွားချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းလှပါတယ်။
ဒီလိုအလန်းစား ဓါတ်ပုံကို ဘယ်လိုရအောင်ရိုက်ခဲ့တယ် ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်ပြောပြစေနိုင်ဖို့အတွက် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ကေ့ပ်ထောင်းမြို့ မှာနေတဲ့ ဆုရဓါတ်ပုံဆရာကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
-ဘယ်လိုနေရာမှာ ဘယ်လို ဂီယာတွေနဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့တာလဲ
” ထိုင်းနိုင်ငံ ခို့ထောင်ကျွန်းမှာ နေ့လည်ခင်းအချိန် အလွတ်ရေငုပ်ရင်း ဒီဓါတ်ပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် Ikelite နဲ့ Canon 5D Mark III အတွဲကို Ikelite DS-161 strobe နှစ်လုံးနဲ့ ဆင်ပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Aperture က f/18, shutter က 1/200 နဲ့ ISO ကတော့ 320 ထားပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ခုပုံလိုမျိုး ရေပေါ်ရေအောက် တစ်ဝက်စီ ပါဝင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေအတွက် Canon 15mm fisheye မှန်ဘီလူးကို ၈ လက်မ Ikelite dome နောက်မှာတပ်ဆင်ပြီး ရိုက်ခဲ့ပါတယ်၊” လို့ ဓါတ်ပုံဆရာကဆိုပါတယ်။
“အလင်းတန်းတွေကောင်းကောင်းပေါ်စေဖို့ အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်ခဲ့တာကလွဲရင် ဒီဓါတ်ပုံဟာ ကျွန်တော်ထွေထွေထူးထူး ပြင်ဆင်ပြီး ရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် တော်တော်လေး အံ့အားသင့်ခဲ့တာပါ၊ ကျွန်တော်က တခါတလေ အဲဒီနေရာတဝိုက်မှာ အလုပ်တောင်လုပ်နေသေးတာဗျ။ လှိုဏ်ဂူရဲ့ အောက်ခြေမှာ ငါးအုပ်ငယ်လေး တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ကံကောင်းစွာတွေ့ခဲ့ရတယ်လေ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကို ဂူရဲ့ နံရံကို ကပ်နိုင်သမျှ ကပ်ပြီး Composition ကောင်းကောင်းရအောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တာပေါ့။ မော်ဒယ်ကို ကျောက်တုံးပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်ခိုင်း၊ ပြီးတော့ ၃ ပုံလောက် အကြမ်းဖြင်း ရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျွနေ်တာ်လိုချင်တဲ့ ပုံရခဲ့တာပဲဗျာ။ ဂူထဲမှာ ရေကလဲ အရမ်းကြည်နေတယ်၊ ပြီးတော့ ရေက လွယ်လွယ်နဲ့ ညစ်ပတ်သွားစေနိုင်တဲ့ အတွက် ရေအောက်ခြေနားမှာလဲ အရာဝတ္ထု တစ်ချို့ ကို အတတ်နိုင်ဆုံး မကန်မိအောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။” လို့ သူကထပ်ပြောပါတယ်။
“အရောင်နဲ့ အလင်းအမှောင်ကလွဲလို့ ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲ ဒီပုံအတွက်ပြင်ခဲ့တယ်လေ။ ရေ၊ ကျောက်တုံးတွေ၊ ရေမှော်တွေရဲ့ အရောင်တွေ ရောစပ်ထားတဲ့ သဘာ၀ အရောင်တွေကို အလင်းရောင် နဲ့တူတူတွဲပြီး ထွက်လာတွေတော့ ကျွန်တော် အရမ်းပျော်သွားတာပေ့ါဗျာ။”
ကျွန်တော်တို့ အခုတော့ မှန်ဘီလူးနောက်က ဓါတ်ပုံဆရာကို ပိုပြီးရင်းနှီးအောင် တကယ့်ကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ရေအောက်က ပုံကောင်းတွေ ပါဝင်တဲ့ ရက်ကေးစ် ဒီ ဗါ့စ် နဲ့ အင်တာဗျူးကို ဖတ်ကြည့်ပါဦးး
မေး။ ။ဟိုင်း ရက်ကေးစ် ရေ၊ ခင်ဗျားရဲ့ အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြပါဦးဗျာ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်က အလွတ်တမ်း ရေငုပ်နည်းပြ/လေ့ကျင့်ပေးသူ/ဒိုင် တဖြစ်တလဲ ကြေးစား ဓါတ်ပုံဆရာ တစ်ယောက်ပါ။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်အကျွမ်းကျင်ဆုံးက အလွတ်ရေငုပ် ဓါတ်ပုံပညာပါ။ ကျွန်တော့ ဓါတ်ပုံတွေအားလုံးနီးပါက အသက်တစ်ခါအောင့်ထားပြီး ရေငုပ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ရိုက်ခဲ့တာပါ။ အီဂျစ်နိုင်ငံ ဒါဟဘ်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ခို့ထောင် ကျွန်းတွေမှာ အများဆုံးအချိန်ပေးပြီး အလွတ်ရေငုပ် သင်တန်းတွေပေးနေပေမယ့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ကေ့ပ်ထောင်းမြို့ဟာ ကျွန်တော့ ဇာတိပါပဲ။
မေး။ ။ အလွတ်ရေငုပ်ခြင်းဆိုတာ ဘာများလဲဗျာ၊ ခင်ဗျားရဲ့ ဓါတ်ပုံပညာကို ဘယ်လိုများ လွှမ်းမိုးပြီး အထောက်အကူပြုပါလိမ့်?
ဖြေ။ ။ ရှင်းပါတယ် အလွတ်ရေငုပ်တယ်ဆိုတာ အသက်တစ်ခါပဲရှုပြီး/အသက်အောင့်ပြီး အောက်စီဂျင်ဗူးမပါပဲ ရေထဲကို ငုပ်တာပါ။ ကျွန်တော့ရဲ့ ရေအောက် ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယို ပညာကို တတ်နိုင်သလောက် အဲဒီဟာက သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အလွတ်ရေငုပ်တယ်ဆိုတာအရမ်းကို လွယ်ကူလာပါပြီ၊ စကူဘာ ရေငုပ်ရင်း ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ ခံစားရတဲ့ ရေဖိအားကြောင့် မသက်မသာခံစားရတာမျိုးကို စိတ်ပူစရာမလိုပဲ ခင်ဗျား ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရေအနက်မှာ ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးလို့ရတာ အလွတ်ရေငုပ်တာပါပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်ဗျာ ရေအောက်က ဘဝဆိုတာ သေချာ ပြင်ဆင်ချိန်မရဘူးဆိုရင် ရေအောက်မှာ ရောက်နေတဲ့အခါ ခင်ဗျားကို အများကြီးသက်ရောက်စေပါတယ်။
မေး။ ။ ရေအောက်မှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းကို ခင်ဗျား ဘယ်လိုများ စတင်ခဲ့လဲဗျာ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ကျွန်တော့ကိုတော်တော်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖီးလ်ဖား ဆိုတဲ့ စကူဘာ ရေငုပ်နည်းပြတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လေ။ သူက လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ ရေအောက်ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့ကို ပိုးသွင်းပေးခဲ့တာ။
မေး။ ။ ဒီနေ့မှာတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ခင်ဗျားရဲ့ ရေအောက်မှာ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ ဗီဇကို 500px မှာ မြင်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တွေ့လိုက်ပြီးတဲ့အခါ သိလိုက်ရပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံတွေ အင်တာနက်ကို တင်ခါနီးတိုင်း သေချာ ရွေးပြီးမှတင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု စိတ်ခံစားမှုမပါတာ၊ စိတ်ခံစားမှုမပေးနိုင်ဘူးလို့ ထင်တဲ့ ပုံတွေကို တင်ဖို့စိတ်မကူးပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့ဓါတ်ပုံတွေ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် အရာဝတ္ထုတွေလိုတိုးပိုလျော့လုပ်ဖို့ ဖိုတိုရှော့လုပ်ရတာလဲမကြိုက်ဘူးဗျ၊ cropping ကိုတောင် မလွှဲမရှောင်သာတဲ့ အခြေအနေမျိုးကျမှသာ လုပ်တာပါ။
မေး။ ။ ရေအောက်က ဘယ်အရာတွေက ခင်ဗျားရဲ့ အကြိုက်ဆုံး subject လဲဗျာ။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းက ရေအောက်ကနို့တိုက်သတ္တဝါတွေကို အမြဲသဘောကျခဲ့တယ် ဥမာဗျာ ဝေလငါးလိုအကောင်မျိုးတွေပေါ့။ အကောင်ကြီးမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ငါးမန်းတွေ၊ ဝေလငါးတွေ နဲ့ လင်းပိုင်တွေကို ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ တကယ်ပဲ ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်
မေး။ ။ ရေအောက်ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်နှစ်ကို ခင်ဗျားဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်များ ခရီးသွားလဲဗျာ၊ ရေငုပ်ဖို့ရော ဘယ်လောက်အချိန်ပေးထားလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော် တစ်နှစ်လုံးခရီးသွားတယ်လို့ ဖြေရမှာပဲ။ အလွတ်ရေငုပ်သင်တန်းမှာနည်းပြမလုပ်တဲ့အချိန်တွေရောက်ရင် ကျွန်တော်အမြဲလိုလိုရေထဲမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်တယ် ဗီဒီယိုရိုက်တယ် အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်အမြဲတမ်း ရေငုပ်တယ်ပေါ့ဗျာ။
မေး။ ။ တကယ့်ကို အံ့မခန်းပဲဗျ၊ ခင်ဗျားရဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်လျှောက်လုံးမှာ တကယ့် စပါယ်ရှယ် ရေအောက်ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာက ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်နေရာလို့များထင်လဲဗျာ?
ဖြေ။ ကျွန်တော် လည်ပတ်ဖို့ လိုသေးတဲ့နေရာတွေက မရေမတွက်နိုင်အောင်ကျန်သေးပေမယ့် ကျွန်တော့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွ့အကြုံနဲ့ပဲ ဖြေပါ့မယ်။ တောင်အာဖရိကရဲ့ ကေ့ပ် အငူ ပတ်ချာလည်က ပင်လယ်ဟာ ရေနေသတ္တဝါကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ငါးမန်းတွေ ဝေလငါးတွေ လင်းပိုင်တွေ အတွက်နေရာကောင်းပါပဲ၊ တဆက်တည်းမှာပဲ ဒါဘန်ဒေသရဲ့ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း နဲ့ မိုဇမ်ဘစ် နိုင်ငံတွေက တကယ့်ကို သဘာဝရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်အသွေးစုံတဲ့ ငါးတွေ ကို ကြည့်ချင်တယ်၊ အလွတ်ရေငုပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်ရင်တော့ ဒါဟဘ်ဒေသနဲ့ စင်နိုင်းဒေသ တောင်ပိုင်းက ရက်စ် မိုဟာမက်ဒ် အမျိုးသားဥယာဉ်တွေဟာ တကယ်ပဲ စံတင်လောက်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဘယ်ကင်မရာနဲ့ ကင်မရာပစ္စည်းတွေကို ခင်ဗျားနဲ့ အတူ ရေအောက်ကို ယူသွားလေ့ရှိလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်ဟာ Ikelite ambassador တစ်ယောက်ပါ၊ အဲဒီအတွက် Ikelite underwater systems ကို ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အပြင် ကျွန်တော်ရိုက်မယ့် subject ပေါ်မူတည်ပြီး DLSR ရယ် မှန်ဘီလူး တွေထဲက ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ခင်ဗျားမှာ ခင်ဗျားကို အားကျတဲ့ ရေအောက် ဓါတ်ပုံဆရာတွေကို ဘာအကြံများပေးချင်ပါလဲ?
ဖြေ။ ။ ရေအောက်ဓါတ်ပုံတွေဟာ ယှဉ်ပြိုင်မှုများလာနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကို စိတ်ဝင်စားနဲ့ ထုတ်ဖော်နေဖို့ အမြဲကြိုးစားပါ။ ဒါ့အပြင် ခင်ဗျားရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း ယေဘုယျကျကျ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို တတ်နိုင်သမျှ မျှော်လင့်ထားပါ။
ကဲ ရက်ကီးစ် ဒီဗ့ါစ် ရဲ့ official website ကိုသွားကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် 500px မှာ သွားကြည့်တာပဲဖြြစ်ဖစ် Facebook page ကို follow လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ တခြားဓါတ်ပုံတွေကို တွေ့နိုင်ပါသေးတယ် ဆိုတာထပ်ပြောပါရစေ။
ရက်ကေးစ် ရဲ့ နည်းစနစ်တွေ ဓါတ်ပုံတွေ ဖန်တီးမှုတွေ ဂီယာတွေ အကြောင်းကို သိချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရေငုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖလှယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အောက်ဖက်မှာ မှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါ။
ကိုးကား။ ။ Klassy Goldberg ရဲ့ The Story Behind This Dreamy Underwater Cave Split-Shot ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံအခြေခံသဘောတရား – camera မြင်ပုံမြင်နည်း
May 17, 2016 Zaw 3
သင့်လက်ထဲက ကင်မရာက အကောင်းဆုံးပါ သို့မဟုတ် #Blizzard2016 ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ၏ နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်း
May 28, 2016 Jedi 0
Instagram မှာ Follow လုပ်သင့်တဲ့ နာမည်ကျော် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ၈ ဦး
July 20, 2016 Jedi 0
ပုံကောင်းကောင်းရစေမယ့် Camera Setting များ
Panning ဓါတ်ပုံတွေကို ဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲ
Camera ကို နားလည်စေဖို့ ၁၀၁ အပိုင်း (၁)
Start Trails ရိုက်ကြရအောင်